के सामाजिक सञ्जाल हाम्रा लागि हानिकारक छन् ? | Hamro Patro
सामाजिक सञ्जालले हाम्रो जीवनमा ओगट्दै गइरहेको हिस्साले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य, रहनसहन तथा समयमा केही असर गरिरहेको छ त ?
सन् २०१४ मा शोधकर्ताहरुले अष्ट्रियामा गरेको अध्ययनले, २० मिनेट फेसबुक चलाएपछि उनीहरुको मुड नराम्रो हुने फेला पारेको थियो । सहभागीहरुका अनुसार समय खेर मात्र गएको अनुभूतिले मुड बिग्रिने उनीहरुको भनाइ थियो । सामाजिक सञ्जालहरुमा राम्रो वा नराम्रो मुड पैmलिने गरेको पनि युनिभर्सिटि अफ क्यालिफोर्नियाले जनाएको छ । सन् २००९ देखि २०१२ सम्मको १० करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुको स्ट्याटसको आधारमा यो कुरा पत्ता लगाएको हो । यस अनुसन्धानका अनुसार कुनै शहरमा खराब मौसमबारे लेखिएको एउटा पोष्टले राम्रो मौसम भएको अर्को शहरका मानिसहरुका १.३ वटा पोष्टहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने पाइएको थियो । यसमा खुशीको कुरा के छ भने, सुखद समाचारले १.७५ वटा पोष्टहरुमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने पाइएको थियो । तर, यही पोष्टहरुले उनीहरुको मुड पनि सपार्छ वा सपार्दैन भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन ।
केही अध्ययनले मानसिक चिन्ता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबीच सम्बन्ध भएको पत्ता लगाएपछि, सामाजिक सञ्जाललाई राम्रो कामको लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । ७०० जना विद्यार्थीमाथि गरिएको दुई वटा अनुसन्धानले अनलाइन अन्तत्र्रिmयापछि विद्यार्थीहरुमा खराब मुड, निराशा र व्यर्थपन बढेको पाइएको थियो । नकारात्मक अन्तत्र्रिmयाबाट डिप्रेसनको लक्षण अझ बढी रहेको पनि पाइएको थियो । सन् २०१६ मा १७ सय मानिसमा गरिएको अनुसन्धानबाट धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने मानिसहरु अरु मानिसभन्दा मानसिक चिन्ताको शिकार बन्ने सम्भावना तीन गुणाले बढ्ने पनि पाइएको थियो । साइबर बुलिङ, अरुको जीवनको प्रगति र आपूm केही नभएको अनुभव तथा सामाजिक सञ्जाल चलाएपछिको विरक्तताका कारणले मानसिक तनाव भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
केही अनुसन्धानहरुले धुम्रपान र मद्यपानभन्दा पनि ट्वीटरको लत थाम्न अभैm गाह्रो हुनसक्ने भन्दाभन्दै पनि मानसिक स्वास्थ्य गडबड निदानबारे निस्किएको पछिल्लो म्यानुअलमा सामाजिक सञ्जालको लतबारे भने केही समावेश गरिएन । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएपछि वैज्ञानिकहरुले समेत मानिसहरुको व्यवहारमा आउने परिवर्तनमा विशेष चाख दिएर अध्ययन गरिरहेका छन् । नेदरल्याण्ड्सका वैज्ञानिकहरुले त झन् सामाजिक सञ्जालको लत पत्ता लगाउने मापन उपकरणको नै आविष्कार गरेका छन् । सन् २०११ मा बेलायतको नटिङह्याम ट्रेन्ट विश्वविद्यालयका डारिया कस र मार्क ग्रिफिथ्स्ले सामाजिक सञ्जालको लत मानसिक समस्या भएको र यसका लागि व्यवसायिक उपचारकै खाँचो पर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । वास्तविक जीवनमा कम अन्तत्र्रिmया गर्ने, सम्बन्धहरुमा समस्या रहेका तथा पढाइमा प्रगति गर्न नसकेका धेरै मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय बिताउने पाइएको थियो ।
कुरा गर्दागर्दै साथीले कहिलेकाहीँ इन्स्टाग्राममा फोटो हेर्नेतर्पm लाग्दा सोच्नुभएको होला सामाजिक सञ्जालले हाम्रो सम्बन्धलाई के गरिरहेको छ भनेर । महत्वपूर्ण कुरा तथा छलफल भइरहँदा पनि फोनले हामीलाई डिस्टर्ब गरि नै रहेको हुन्छ ।
जर्नल अफ सोसल एण्ड पर्सोनल रिलेसनसिपमा लेखेका अनुसन्धानकर्ताहरुले ३४ नचिनेका जोडीहरुलाई जीवनमा भर्खरै घटेको रमाइलो घटनाबारे १० मिनेटको कुराकानीमा डाँक्दा आधा मानिसहरुले फोन टेबलमा आपूmनजिकै राखेका थिए । आफ्नै आँखा अगाडि फोन राखेकाहरुले १० मिनेटको वार्तालाप राम्ररी सम्झिन नसकेको, कुराकानी खासै अर्थपूर्ण नलागेको र कुरा गरेको साथीसँग पनि खासै नजिकिन नसकेको बताएका थिए । यसले प्रेम सम्बन्ध पनि खासै मजबुत बनाउन नसकेको पाइएको छ । क्यानाडाको युनिभर्सिटि अफ ग्वेलफले १७ देखि २४ वर्षका ३०० मानिसमाथि गरेको अनुसन्धानबाट महिलाहरुले पुरुषहरुभन्दा बढी फेसबुक प्रयोग गर्ने र आफ्नो प्रेमीले अरु केटीलाई साथी बनाउँदा केही इष्र्या लाग्ने गरेको बताएका थिए । उक्त अनुसन्धानले फेसबुकले इष्र्याको वातावरण सिर्जना गरिदिने र सम्बन्धमा ठेस पु¥याउन केही भूमिका खेल्ने गरेको भनी निष्कर्ष निकालेका थियो ।